Baidoa Media Center » Dagaalo ka dhacay inta u dhexayso gobolada Bay iyo Gedo.
Dagaalo ka dhacay inta u dhexayso gobolada Bay iyo Gedo.
June 25, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Dagaal dhabagal ah ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa gobolada Gedo iyo Bay ayada oo ay ka dhasheen qasaarooyin soo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamay oo kala ah ciidamada Itoobiya iyo kuwa Xarakada Alshabaab.
Dagaalka oo ka dhacay inta u dhexayso degmooyinka Berdaale iyo Yurkud gaar ahaan halka lagu magacaabo Kurtaale ayaa waxaa ku geeriyooday ilaa 6 kamid ahayd dhinacyadii dagaalamay ayada oo ay hada xaaladu degantahay.
Inta badan dagaalyahanada Alshabaab ayaa waxa ay dhabaha u galaan ciidamada dowlada FKMG Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee ku safra inta u dhexayso gobolaka Bay iyo Gedo.